Kedu uru nke oriọna silicone? Silicone lampshade ka nke silicone na roba nke na-arụ ọrụ nke ọma, nke nwere njirimara nke ikpuchi ọkụ, nchebe radieshon na nguzogide okpomọkụ dị elu. Silicone lampshade bụ ihe ama ama na mba ofesi, ọkachasị na Europe na ...
Theghọta ọdịiche dị n'etiti silicone sample ebu na mmepụta ebu? Na ụlọ ọrụ ngwaahịa silicone, mgbe ndị ahịa ọhụrụ nọ na nyocha anyị iji kwurịta imekọ ihe ọnụ, anyị ga-ajụ ndị ahịa ma ngwaahịa silica gel a nwere ebu, ọ bụrụ na enweghị ebu, anyị kwesịrị ịkọ ...
Ike iche nke ngwaahịa silicone:
Silicfọdụ ngwaahịa silicone dị n'ahịa na-adị nro dị nro, ụfọdụ siri ike ntakịrị, nke kpatara ike nke silicone. Ngwaahịa silicone dị iche iche nwere ihe dị iche iche achọrọ maka ịdị nro na ịdị nro, nke metụtara usoro na akụrụngwa nke ngwaahịa mbụ. Ohaneze s ...
Ngwa silicone nwere ihe eji emeputa ihe, gini kpatara iji mepee ihe nlele?
Ngwa silicone nwere ihe eji emeputa ihe, gini kpatara iji mepee ihe nlele? Ọtụtụ ndị ahịa ndị na-adịghị mma na ngwaahịa silicone na-ajụkarị ajụjụ, nke bụ: "ngwaahịa silicone nwere ebu ebu, gịnị kpatara ị ga-eji mepụta ihe atụ?", Gini mere iji tufuo oge na ume iji mepee otu ihe nlele? Ma maka t ...
Ihe nke ahaziri silicone roba ngwaahịa:
Abụọ ọcha nke ahaziri silicone roba ngwaahịa: ngwaahịa imewe na ebu Ndinam: Ke ofụri ofụri, ahaziri echiche nke silicone roba ngwaahịa na-metụtara ndị na-emeputa usoro na ngwaahịa ụdị nke okokụre ngwaahịa. Ọ bụrụ na echiche echiche nke ngwaahịa ahụ edoghị anya, ebu ...
Olee otu esi eme ihe atụ nke ngwaahịa silicone?
Olee otu esi eme ihe atụ nke ngwaahịa silicone? Usoro mmepụta nke ngwaahịa silicone dịtụ mgbagwoju anya, ụdị ngwaahịa silicone ọ bụla kwesịrị ịnwe ebu tupu ị mee ya, ihe ndị teknụzụ chọrọ maka ịkpụzi dị oke elu, ma ọ bụrụ na ogo silica gel ebu abụghị ezigbo goo ...
Uru nke spraying ala okpomọkụ aka obi na-eche mmanụ:
Uru nke spraying obere okpomọkụ aka obi na-eche mmanụ: 1. Silicone ngwaahịa sprayed na ala-okpomọkụ obi na-adị mmanụ nwere uru nke antistatic, mfe filtration, ike adhesion, ezi na-eyi ndị na-eguzogide, ala mmiri okpomọkụ, adụ na siri obi na-adị, ezigbo film ọdịdị, unifo ...
Kedu uru na ọghọm dị na ngwaahịa silicone?
Ọ bụ ezie na a na-ahụ ngwaahịa nke silicone n'okporo ámá ugbu a, anyị nwere ike iji silicone na ndụ anyị kwa ụbọchị. N'ihi na ụlọ ọrụ silicone amalitela ngwa ngwa na China na afọ ndị na-adịbeghị anya, e nwere ọtụtụ kichin kichin, ihe ndị dị mkpa na silicone na onyinye ndị ọzọ na silicone pr ...